SIDA LOO ABUURO SABIIB AH CANAB GUGA: TALOOYIN WAX KU OOL AH - CANAB
Sida loo beeray canab ku guga
Dalagyada beeraha sida caleemaha ayaa sii kordhaya oo sii kordhaya ee cagaarka xagaaga gaarka ah. Dad badan waxay raadiyaan inay kobcaan miiska iyo noocyada farsamada ee is-wax-soo-saaridda seddax guri. Laakiin maqaalkani ma aha mid ku saabsan arrintan. Waxaan ka hadli doonaa sida loo beero canab on our gaar ah geedo iyada oo aan wax caawimo guga.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada beerashada guga
Xilliga dayrta waa kuwa ugu doorbida beerashada dhammaan beeraha beerta, laakiin inta badan waxaa la qabtaa guga. Xuquuqda codbixinta goonida ah weli waa adiga, waxaanu ku falanqeyn doonaa haddii ay tahay mid ku habboon beerto canab dhulka ku yaal guga. Waxaanu si dhakhso ah u socodsiinaynaa dhinacyada wanaagsan iyo xun ee dhacdadan.
Faa'iidada ugu weyni waa in baadiyaha xilliga xagaaga ay leeyihiin waqti si ay u helaan si fiican u ah meel joogto ah, waa ku filan si aad u hesho si xoog leh si ay si fudud u noolaadaan jiilaalka koowaad. Uma baahnid inaad ka welwelisid safarka oo aad ka fekereyso sida aad uga qarin karto dhaxan. Waa lagama maarmaan in la fuliyo shaqada diyaarinta ka hor inta aan laga beeri canab. Digo iyo bacrimiya ciidda iyo diyaariyo dalool ah seedling mustaqbalka dayrta. Sidaas waxaad caawin doontaa ciidda si weyn u kordhin bacriminta, iyo tani waxay si fiican u saameyn doontaa heerka badbaadada canab ah. Inta badan canabkeed ka dib xilliga abaarta ee ugu horreysa, qaabka geedo ayaa diyaar u ah inay midho u dhasho sannadka labaad. Marka la beerto xilliga dayrta waxay dhacaysaa sanad kadib. Guga waa waqtigaan sanadka marka ay sahlan tahay in la xisaabiyo waqtiga soo degitaanka. Xilliga dayrta, dhaxan horraantu waxay ku dhufan kartaa si lama filaan ah, oo aan waxyeeli karin geedo, laakiin sidoo kale waxay qaboojinayaan ciidda, taasoo dhawaan u noqonaysa mid aan habboonayn beerashada. Dad badan oo hareeraysan oo bilaabay in ay fahmaan asaaska xirfad-qoraalka, canab beereed guga. Waa sahlan tahay in lagu daryeelo geedo, iyo damaanad qaadka badbaadada heer sare.
Si kastaba ha ahaatee, canab beerto guga leh geedo leh waxoogaa nuucyo ah oo saameyn kara isbeddelka go'aankaaga ee ku aaddan beerashada dayrta. Badanaa xilliga guga, canabku weli aan sii xoogeysaneynin ma laha qoyaan ku filan, sidaas darteed waxaad yeelan doontaa dhibaatooyin dheeraad ah ee waraabin joogta ah oo badan. Geed cusub oo la beero ayaa wali ka soo nuugta biyaha si liidata, iyada oo aan la qallajin karin.
Guga, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la qodo ciidda si fiican iyo u qaawi balka hore, dhogorta ama humus. Beerto hore waxay si xun u saameyn kartaa geedo of canab, taasoo horseedi karta jabinta cudurada fangas kala duwan. Geedka ugu fiican waxaa la gadan karaa oo kaliya xilliga dayrta, gugana waxaa jira fursado ah inuusan helin kala duwanaansho ku habboon ama si aad u hesho geedo dhaxan ama qoyan ama qallalan.
Ma taqaanaa? Waxaanu leenahay caadada noocan oo kale ah, markay tahay Maalinta Sannadka Cusub, oo hoos timaadda saacadaha kulaylka, waxaad u baahan tahay inaad furto champagne, ku shub muraayada, adigoo doonaya, inaad cabto. Laakiin Portugal iyo Spain, wax walba way kala duwan yihiin. Bedelkii champagne, hal daqiiqo kahor imaanshada Sanadka Cusub, dadku waxay cunaan canab, iyagoo sameynaya 12 rabitaan.
Canab dhirta guga
Haddii laga beerto canab dhul furan guga waxaa la qorsheeyey, ka dibna ciidda waa in la diyaariyaa dayrta. Haddii tani aysan shaqeynin, ka dibna ha ka xishoonin guga hore, si canabku u leeyihiin ilaa laba bilood si ay u degaan carrada, waxay ku ururiyaan qoyaan iyo qalab nafaqo leh.
Sida loo doorto geedo for canab beerto ee guga
Marka aad iibsaneyso geedo, si taxadar leh u baaro iyaga maqnaanshaha cudurada iyo calaamadaha waxqabadka cayayaanka, gaar ahaan phylloxera. Maaddada abuurka ugu haboon waa sapling hal sano ah. Waa in ka badan seddex xidid ilaa 12 cm dheer iyo 3-4 mm qaro weyn. Ka hor inta beerto dhulka, seedling waa in lagu nadiifiyaa xal gaar ah. Waxaa la diyaariyaa 10 litir oo biyo ah, 400 g oo ah dhoobo iyo 200 g of hexachorane. Haddii qalabka beeraha la qalajiyo, qoyso biyo ilaa 48 saacadood.
Ka hor inta aadan beeri, mar kale si taxadar leh u baaro geedo iyo ka saaro xididada waxyeello, iyo sidoo kale kuwa ku yaal kor ku xusan labada noodhka hoose. Xididdada hoosta hoose waa in la jaraa. Ka tag 4-5 indhood on biqil, ka saar nasashada. Ka hor inta beerto, yareeyo xididdada seedling galay isku dar ah digada - 1 qayb, dhulka - 2 qaybood iyo stimulator koritaanka. Ku dabool wax kasta oo biyo ah si aad u hesho miisaan siman oo siman.
Qof kastaa ma laha fursad uu ku qaato 5-10 hektar oo dhul ah beertiisa canabka ah. Isla markiiba, dhibaatada ayaa soo ifbaxeysa sida loo abuuro canabka guga - gooynta ama sabuurada. Sidaa daraadeed, waa inaynu raadinnaa dhul bilaash ah oo aan ku korni karno ugu yaraan dhowr duurka. Xaaladda ugu horreysa iyo tan ugu weyn ee kobaca wanaagsan iyo midhaha canabku waa iftiin. Warshadani waa mid aad u diirran, sida taariikh ahaaneed waxay horumarisay in ay si fiican ugu koraan dalalka koonfurta. Inkasta oo dadaalada beeraleyda, xitaa gaar ahaan loogu talagalay gobollada woqooyiga ee noocyada kala duwan ee canabkuna ma istaagi karo meelaha hoosaadka ah. Sidaa darteed, beeritaanka ee hooska waa wax aan la aqbali karin.
Cinabta ugu raaxada leh waxay ahaan doontaa haddii raajooyinkeeda qorraxda ay iftiimin doonto maalinta oo dhan. Dabcan, ma fududa inaad kari karto goobtan oo kale, laakiin waa inaad isku daydaa. Haddii kale, dhirta ma siin doonto koboc dhaqso ah iyo goosashada wanaagsan. Raaskulka ku filan ee sonkorta iyo qaan-gaadhka oo buuxa dalagga ma'aha suurtagal marka uu sii kordhayo hooska. Qanjaruufo, waxaad ka saari kartaa geedaha kale ee faragelinta.
Midda labaad waa dhul. Ka fogow meelaha hooseeya ee ay biyuhu ku urursan karaan oo joogaan waqti dheer. Raadi meel sare ama samee naftaada. Aagga kaas oo badanaa ka mid ah xididdada geedka canabka ah waa inaanay noqonin joogsi joogta ah oo biyo ah. Ugu dambeyntii waa dhul. Uma baahnid inaad doorato. Haddii ciidda aysan ku haboonayn Halabuurka canab, ka dibna marka laga beerto geedo habka kaliya ee soo baxayaa waa godkii beerto. Waa inaan ku dadaalnaa inaan helno lakabka bacriminta, taajir ah ee cusbada iyo macdanta macdanta leh, oo leh astaamin dhexdhexaad ah, hawo fiican iyo awooda qoyaanka.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, ururinta canabku waxay khatar u tahay inay samayso in ay lagama maarmaan noqoto in dadka beeraha laga goosto ay markii ugu horeysay sameeyaan oo ay bilaabaan shaqo. Waxyaaba waa in canabkihii dheeraa ay ku tiirsan yihiin geedaha soo koraya iyaga oo u dhow, kuwaas oo ugu dambeyntii la qalajiyey. Ma jirin wax ceymis ah, kadibna canabkii ugu caansanaa wuxuu ku koray dushooda. Kadibna, dareenka macnaha ereyga, miraha canabku wuxuu ku kici karaa nolosha aadanaha.
Waqtiga soo kabashada
Qaar ka mid ah shuruudaha marka laga beerto canab dhul furan guga, way adag tahay in la soo waco. Ka dib oo dhan, tan waa in lagu sameeyaa cimilada diiran, marka heerkulka hawadu uusan ka yarayn 15 º C, iyo ciidda waxay ku guulaysatay inay kululeeyso ugu yaraan 10 ºC. Xaaladahan oo kale, dhirta geedo ayaa sida ugu fiican u dhacda, taas oo macnaheedu yahay in canabku laga dhigi karo dhamaadka Maarso illaa bilowga Juun.
Inta badan waxay ku xiran tahay abuurka la doortay. Dad yar ayaa og in maaddada beerto ay ka mid tahay laba nooc: geedo daaqsiyo leh oo adag. Farqiga keliya ayaa ah in kuwa ugu horreeya ay yihiin kuwo ka yar, sababtoo ah waxaa lagu beeray guga waxaana kaliya oo lahaa wakhti yar oo ubax ah. Badanaa waxaa lagu iibiyaa weel yar oo leh ciidda isku dhafan. U hubso inaad ka soo qeyb gasho safka hore ee caleemaha. Waa in lagu beeraa muddada u dhaxaysa May 20 ilaa June 15, sababtoo ah waxay ku jirtey weelka tan iyo bishii Febraayo. Qalabka adag ayaa ah geedkii hore u koray dhulka banaan, laakiin wuxuu qoday jiilaalka. Waxay horey u leedahay nidaam xidid oo ku filan oo uu leeyahay kalyo u gaar ah. Waxaa fiican in hore loo beero - laga bilaabo bartamihii Abriil ilaa bartamihii May, diiradda xaaladaha cimilada iyadoo la marayo dhawr maalmood ka hor.
Diyaarinta dhoobada dhulka
Ceelka dhulka ee beerista mustaqbalka canabku wuxuu diyaariyaa waqti dheer oo aan sahlaneyn. Intaa waxaa dheer, in la qodo, waa in sidoo kale bacrimiya. Cabbiraadda ceelasha waa inay noqdaan 80 cu. aragti in uu jiro boos ku filan oo keliya ma aha nidaamka asaasiga ah ee warshad qaangaar ah, laakiin sidoo kale bacriminta 4ta sano ee xigta.
Marka qodo daloolka, u kala dhig qaybaha ciidda laba jajab: hal mid ah - midka sare, iyo kan kale - kan hoose. Lakabka ugu horreeya waxaa loo tixgeliyaa bacriminta ugu badan, markaa marka hore waa inuu tagaa dalool buuxa. Lakabka waa in uu ahaado ugu yaraan 10 cm, ka dibna, ku dar 40 kg oo digada wanaagsan, 500 g oo ah bacriminta nitrogenous iyo 500 g ash alwaax. Taas ka dib, lakabka 10-centimeter ee ciidda bacriminta ah ayaa mar kale la buuxiyaa, wax walbana si fiican ayuu isugu darsaday.
Waa muhiim! Wixii caleemaha la beeray, dhammaan Bacriminta ma loo baahnaan doono, laakiin marka ay gasho xilliga jimcaha, xididdadiisa waxay geli doontaa lakabka bacrin ah.
Mar labaad si aad u buuxisid ciidda bacrin ah, illaa qoolka godku ku sii jiri doonin 20 cm Si aad si cad u fahamtid sida loo beeray canab guruud ah guga, waxaan ku talinaynaa inaad daawato video this:
U diyaargarowga horaantii beerta dayrta dayrta, waxay bartaan sharciyada beerto canjeelada guga. Xarunteeda, samee nasasho yar oo ah 40 cm, horeyna waa inaad u bixisaa xannibaadda carrada aan kugu hanjabin haddii aad horeyba u diyaarisay godkii dayrta. Haddii la qoday horraanta gu'ga, ka dibna u sii dheereeya 35 cm, iyo 5cm ee haray, dhalmada ayaa ugu dambeyntii ku dhici doonta. Qeybta hoose ee fasaxa waa inay sameysaan tuulo ay ku beeri lahaayeen canab.
Waa muhiim! Kordhin shinni si aad u hesho taageerada dheeraadka ah ee canabku ay ku socdaan burooyinka.
Ka dib markii foosha ee seedling ah, biyo badani. Waa inaad heshaa qiyaastii 40 litir oo biyo ah. Marka canab lagu beeray guga, sidaas darteed si fiican u degi doonaa oo aan qashin qoyaanka ilaa inta ciidda si buuxda u buuxsanto, waa la daboolay. Hoyga waa in laga saaraa oo keliya kaddib marka la isku xiro. Warshad cufan waa in la gashadaa ama la daboolaa ciidda bacrin ah ama ciid si ay u samayso tuulo.
Waa muhiim! Ciidadu way baabi'i kartaa, markaa waa in la daboolaa oo la tuujiyaa wax culus.
Laba toddobaad ka dib, abuurka waa la ogaaday, waana laga xoreyn karaa "xabsi." A seedling daaqsigu ma seexanayo ciid, maadaama ay dhaawici kartaa caleemaha cagaaran. Waa in lagu daboolaa sanduuqa kartida caadiga ah leh daloolka koritaanka sare. Ku hayso wax ka badan laba toddobaad.
Talooyinka beeritaanka canab ee guga
Markaad ku beeri canab ku guga guga, oo hubi inaad ogaato nooca carrada, habka beerto waxay ku xiran tahay. Tusaale ahaan, waxaa lagula talinayaa in lagu beero carrada carrada leh ee dabaysha. In dhoobo iyo loamy carrada aan si wanaagsan u kululayn, dhul dul saaran. Waagii hore waxaa sidoo kale loo yaqaan "abuuray".
Wixii ku habboon ee waraabinta iyo quudinta canab, waxaad ku rakibi kartaa dhalooyin caag ah oo la gooyo hoos u dhexeeyo geedo. Inta u dhaxaysa noocyada miiska waqtiga wakhti dheer, dhalooyinka ayaa u baahan in la beddelo dhuumaha asbestos-cement. Xaaladda miisaska miiska, saddex sano kadib, waxba laguma dhigi karo. Qaybta weyn ee khamriga sii kordhaya waa in ay la qabsadaan hawsha madaxbannaan ee biyaha ee ciidda. Dhererka xididada qoto dheer waxay si toos ah u saameyn doontaa tayada beergooyska, iyo sida, khamriga.
Ma taqaanaa? Canab waa calaamad u ah Armenia. In Kitaabka Quduuska ah waxaa jira xusuusta xaqiiqda ah in Nuux horey u koray halkaas. Xitaa saynisyahannadu waxay xaqiijinayaan xaqiiqda ah in noocyada ugu horreeya ee canabku uu ka yimid Caucasus, Turkey iyo Iran.
Isla marka aad iibsato noocyo aan la kicin, ha ku degdegin inaad canab beeraan meel joogto ah guga. Ha koraan ilaa burooyinka calaamadaha ugu horreeya ay ka muuqdaan dugsiga, way fududaan doonaan in ay halkaas ku daboolaan. Qaar ka mid ah rootersaalku ma si dhakhso ah ugu beeraan geedo furan oo furan, laakiin waxaa lagu hayaa weelal gaar ah oo nus ah dhulka lagu aaso. Xilliga dayrta waxay u soo qaadaayaan dhulka hoostiisa, guga dabayaaqadana waa la beeray sida ay tahay. Habkani wuxuu kicin karaa warshad si uu u noqdo mid goos goos ah.
Had iyo jeer qorshee qorshe beeritaanka canabkiinna, ha u beerin si aan caadi ahayn. Isku darka noocyo kala duwan ee kooxaha ku habboon. Tani waa lagama maarmaan maxaa yeelay isbeddelka soo degitaanka wuu ka duwan yahay. Wixii juice-noocyo khamri ah, masaafada u dhaxaysa geedo waa inay ahaataa 80 cm, kaneecooyinka - laga bilaabo 1.5 mitir, iyo inta u dhaxaysa saf ka 2 ilaa 2.5 m. Grouping sidoo kale lagama maarmaan u ah Bisaylkiisa iyo baraf caabbi. Sidaas awgeed waxaad u fududeyneysaa naftaada si aad u daryeesho dhirta, adigoo ka takhalusaya qarinta aan loo baahnayn iyo buufinta. Geedo la kariyay waa in aan lagu beerin si aan fiicnayn. Fikrad ahaan, waxaa fiican in la dhigo iyaga, tilting xagasha ugu badnaan. Haddii kale, da'da geedka canabka ah ayaa noqon doona dhibaato. Waqti ka dib, u wareeji xididadaada.
Ha iloobin in canabku uu leeyahay dabayl ciriiri ah. Markaad furtid fallaaro farabadan, ku dheji khudbadda ama dhibcaha oo kaliya meel bannaan. Iyada oo daryeelkan, caleemaha sanadlaha ah ayaa kori doona isla. Haddii aad iyaga u xirto vertically, ka dibna caleemaha siin doonaa koritaanka xoog leh oo kaliya ka soo indhaha sare, waqti marka kor u ma koraan karaa at dhan.
Si xad dhaaf ah u xaddidid waraabinta. U hubso inaad fuliso fuuq-galka canabka ah ee yar yar labo sano. Waraabinta guud, qoyaanka-qashinka, samee dayrta. Toddobaad ka hor inta ubaxan la filayo waa inuu joojiyaa waraabinta. Fuuqbaxa dheeraadka ah wuxuu keeni doonaa ubaxyo iyo dib u dhigaa Bisaylkiisa canab.
Daadinta ayaa sababi karta cudurro badan. Iyo sidoo kale canab si xawli ah u wareejin caleemo qoyan iyo dhulka qoyan. Waxaa lagugula talinayaa inaad diyaarisid roobka geedaha canabka ah.
Gooyo canab waa qasab. Haddii kale, daahyada ayaa si weyn u kori doona, iyo berry waa la burburin. Laakiin ee sanadka ee beerto budo aan loo baahnayn, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro oo kaliya qaybo cagaaran oo aan la daboolin ee caleemaha dayrta. Sannadka saddexaad, billow jarida caleemaha. Ku dhaqmaan sida ay isugu xigaan waxyaabo dibadda ah - gargaarka, ciidda iyo wadarta heerkulka firfircoon. Qaado warqado, kaas oo ka soo baxaan ubax koraan caleemaha fruiting.
Tamaandhada ilkaha macaan - noocyo ah sonkorta yaanyo iyo casaan
Kala duwanaansho baradho "Dareemo": sifooyinka, sirta ee beerashada guuleysiga
Soosaarayaasha Ruushku waxay ku guuleysteen in ay qiimeeyaan kaabajka
Rootiyo caafimaad leh - dhaladooda ubaxan: gloxinia beerista ku haboon
Cheese ee Ukraine ayaa kor u kacay qiimaha dhowr jeer
Toodhada basasha-fasirka ayaa lagu qadariyaa muuqaalkooda quruxda badan iyo dhadhanka aadka u fiican. Marka la eego dhalidda sare iyo awooda aan lumin mulkiyadooda marka la kaydiyo illaa shan bilood, kala duwanaanshahan ayaa si kalsooni leh u helaya caan ku ah beeraleyda beeraha. Qabsoomidda geedaha tufaaxa iyo iska caabinta cudurada waxay wax ku biirinayaan. Read More
Waa maxay clematis ku haboon ee sii kordhaya xaafadaha
Beeridda hibiscus cows, daryeel u leh isaga iyo sawir geedka ubax ah